रंगशाला निर्माणमा राजनीतिकरण र भ्रष्टाचार हुन दिन्न : रेणु दाहाल – रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ श्रावण १ बुधबार, १०:२२
रंगशाला निर्माणमा राजनीतिकरण र भ्रष्टाचार हुन दिन्न : रेणु दाहाल
२०७५ माघ १७ गते प्रकाशित, l १३:२०
रेणु दाहाल, मेयर, भरतपुर महानगरपालिका
चर्चित हास्य कलाकार धुर्मुस र सुन्तलीका नाममा खोलिएको ‘धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसन’ ले भरतपुर महानगरपालिकाले दिएको जग्गामा ३ अर्बको लागतमा अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउने घोषणा गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले कुनै ठूलो निर्माण कम्पनीलाई जस्तै महत्व दिएर धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनसँग बुधबार रंगशाला निर्माणको औपचारिक सम्झौता नै गरिसकेको छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर महानगरकी प्रमुख रेणु दाहालसँग ऋषि धमलाले कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला भरतपुर महानगरपालिकाले आफैँ नबनाएर किन धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशलाई जिम्मा दिनुभयो ?
भरतपुर महानगरपालिका स्वयम् पनि संलग्न छ । महानगरकै नेतृत्वमा फाउण्डेसनले बनाउने हो ।
हाम्रो देशमा महानगरले गर्न नसकेको काम अब धुर्मुस सुन्तलीले गर्ने भए हैन ?
महानगरपालिकाले बनाउन नसक्ने होइन । केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मको स्रोत साधन र बजेटले पनि बनाउन सकिन्थ्यो । हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रारुपअनुसार अगाडि बढ्न खोजेका हौँ । हामीले विकास निर्माणका काम तिब्रताका साथ अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ । यसमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र लगानीबाट गर्दा छुट्टै महत्व हुन्छ । यसअर्थंमा फाउण्डेशनसँग सहकार्य गरिएको हो ।
तर पनि यो काम त सरकारले गर्नुपथ्र्यो नि । प्रचण्डजी चितवनबाट चुनाव जितेर आउनुभएको छ । तपाई त्यहाँको मेयर । ठूला ठूला परियोजना आफैँले बनाउनुपर्दैन ?
हो, यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जस्तै हो । सरकारले गर्नुपथ्र्यो । प्रचण्डजस्तो शक्तिशाली नेता भएको जिल्ला, पूर्व प्रधानमन्त्री, सत्तारुढ दलको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । यति ठूलो आयोजना किन सरकारले गरेन भन्ने प्रश्न नउठेको होइन । तर हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने छ । यसका लागि विभिन्न पक्षको सहयोगको आवश्यकता छ ।
रंगशाला निर्माणका लागि सरकारी निकायको भूमिका त केही पनि देखिएन । त्यति धेरै बजेट फाउण्डेशन आफैले व्यवस्था गर्ने भनिएको छ नि ?
रंगशाला निर्माणका विषयमा हामीले हिजो सम्झौता गर्यौँ । निर्माणमा भरतपुर महानगरपालिकाको नेतृत्वदायी भुमिका रहन्छ । रंगशाला निर्माण सकेर हस्तान्तरण नभएसम्म महानगरको निर्देशक समितिले हेर्छ । निर्माणका बेला पनि महानगरको प्रत्यक्ष भूमिका रहन्छ ।
धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशन र महानगरको सहकार्य कसरी हुन्छ त ?
निर्माण अवधिभर सम्पूर्ण व्यवस्थापनको काम फाउण्डेशनले गर्छ । त्यसको प्रत्यक्ष निगरानी, नियमन, अनुगमन र निर्देशन महानगरपालिकाले गर्छ ।
बजेटको व्यवस्थापनमा महानगरको भूमिका के हुन्छ ?
पैसा जुटाउने काममा महानगर र फाउण्डेशनले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा आव्हान गर्छ ।
भनेपछि महानगरको भूमिका प्रभावकारी नहुनेरैछ हैन ?
प्रत्यक्ष रुपमा महानगर वा सरकार सहभागि हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन प्रभावित हुन्छ । त्यसकारण हामी जोडिन मिल्दैन । बजेटमा हामी सहभागि हुनका लागि टेण्डर आव्हन गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्माणको सम्पूर्ण व्यवस्थापन फाउण्डेशनले नै गर्छ ।
त्यसोभए सरकारले एउटा रंगशाला पनि निर्माण गर्न नसक्ने रहेछ हैन ?
सरकारले बनाउन नसक्ने भन्ने होइन । बनाउन सकिन्छ । सरकारले अरु थुप्रै काम सरकारले गरिरहेको छ । ठूला र गौरवका आयाजनाहरु सरकारले नै बनाइरहेको छ । सबै काम सरकारले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने हुँदैन । सबै पक्षको उत्साहजनक सहभागिताको खाँचो छ । जनताको पनि सहभागिता र लगानीले नै आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्छ ।
संघीय सरकारको सहयोग र समर्थन छ ?
छ । यो काममा सबैको सहयोग छ । रंगशाला भनेको साझा आवश्यकता र काम हो । समयको आवश्यकता र माग पनि हो ।
रंगशाला निर्माणमा राजनीतिकरण हुने हो कि ?
भरतपुर महानगरले राजनीतिकरण गर्न दिदैन । अहिलेसम्म यो महानगरमा अहिलेसम्म राजनीतिकरण भएको पनि छैन ।
साँढे तिन अर्वको योजना छ । भ्रष्टाचार पनि हुने हो कि ? कसरी रोक्नुहुन्छ ?
हुँदैन । निर्माणमा आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी फाउण्डेशनको हो । महानगरले निरन्तर अनुगमन गर्छ ।
बुहारीद्वारा सासूको हत्या
केयूमा प्राविधिक शिक्षामा स्नातकोत्तर तह शुरु
फोहर सङ्कलन गर्ने निजी संस्था दर्ता गर्दै महानगर
देशभर २४३ सडक पुलको निर्माण
किशोरीलाई एसिड धम्की बढ्दो
वार्ताको औपचारिक पत्र पर्खाइमा विप्लव
सद्दे थन्क्याउँदै, नयाँ किन्दै
नेकपामा मिल्यो भागबन्डा
तीन दिनमा ७६ अर्ब भुक्तानी : ४६ हजार चेक काटिए, मध्यरातसम्म बैंक खुला
कांग्रेसमा नियमावली विवाद : सदस्यता शुल्क घटाइने लेबीको नाम फेरिने
बाढीपहिरोले ३० राजमार्ग र ४ पुलमा क्षति
रंगेहात समातिने डरले झ्यालबाट हाम फाल्दा मृत्यु
ओलीविरुद्ध नेकपाभित्र मोर्चाबन्दी
१४९ सालपछिको महा—चन्द्रग्रहण
गुरुपूर्णिमाको चन्द्रमा (तस्वीरसहित)